काठमाडौं । यस वर्षको दशैंको टीकाको साइत असोज २१ गते विहान १० बजेर ३५ मिनेटका लागि निर्धारण गरिएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको शनिबार बसेको बैठकले दशैं घटनास्थापनादेखि विजया दशमीसम्मको साइत निर्धारण गरेको हो । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र गौतमले विजयी दशमीको दिन देवी विसर्जन
स्काई राई/काठमाडौं । सरकारले नेपाली साहित्यका विशिष्ट साधक एवम् प्रसिद्ध इतिहासविद् स्व. बालचन्द्र शर्मालाई उचित सम्मान गर्न नसकेको बताइएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा बालचन्द्र स्मृतिसभा परिवारले आयोजना गरेको उनको जन्म शताब्दी समारोहका वक्ताहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी
काठमाडौँ, १७ भदौ- भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषि पञ्चमी आज नेपाली नारीहरुले अरुन्धतीसहित सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन् । महिलाले आज बिहानै उठेर स्नान गरी सोमबारको हरितालिकाको व्रत समापनका लागि गोदान, पूर्णपात्र लगायत धार्मिक कृत्य गरी सवा सात बजेपछि नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र
कोशराज रेग्मी पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीलाई प्रदान
काठमाडौं । कोशराज रेग्मी स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीलाई प्रदान गरिएको छ । पिताम्बर खिलेश्वरी स्मृति प्रतिष्ठान र नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले विराटनगरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुरस्कार प्रदान गरेको हो । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर
अवैद्य तरीकाले एटीएमबाट पैसा निकाल्ने ५ चिनियाँ दरवारमार्गबाट पक्राउ
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले अनाधिकृतरुपमा एटिएमबाट पैसा निकाल्ने पाँच चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मध्यरातमा दरबारमार्गस्थित नवील बैंकको एटिएमबाट अनाधिकृतरुपमा पैसा निकाल्दै गर्दा पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ ’ प्रस्तुत भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताए । उनले भने, ‘विधेयकलाई
ह्याप्पी फेमिली दोस्रो वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट समाजसेवा गर्दै आईरहेको टिम ह्याप्पी फेमिलीले दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाएको छ । संस्थाले वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा विभिन्न सामाजिक संघ/संस्थाहरूलाई प्रशंशापत्र प्रदान गरिएको थियो । मनोविद् डा. गोविन्द उपाध्यायको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा समूहका कोषाध्यक्ष
रविसहित तीनैजना विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिँदै
चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पत्रकार रवि लामिछानेसहित तीनै जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले अनुसन्धान पुरा गरेर सबै प्रमाणसहित फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौरापर्वले राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउँदै आएको बताउनुभएको छ । गौरापर्वको शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले हाम्रो समाजमा गौरापर्वको आफ्नै ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता लोक परम्परा एवं सांस्कृतिक पर्वले विविधतामा एकता, सामाजिक
लायन्सको सहयोगमा २ सय जनाको मधुमेह परीक्षण
काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ काठमाडौं रिजेन्सी र लियो क्लब अफ काठमाडौं रिजेन्सीको सहकार्यमा मधुमेह परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको छ । बुधवार सम्पन्न शिविरमा दुइ सय जनाको मधुमेह रोग परीक्षण गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा ग्रीन भ्याली वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि सहकार्य रहेको थियो । कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष
काठमाडौं । लायन्स क्लव अफ भक्तपुरका तीन ओटै क्लबले गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरमा सञ्चालित ‘गुप्तेश्वर महादेव जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र’ लाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । तीन ओटै क्लबका सदस्यहरूले रू. ६१ हजार ५ सय सहयोग गर्नुका साथै मन्दिर परिसरमा सरसफाई गरेका थिए । गत वर्ष स्थापना भएको जेष्ठ नागरिक
काठमाडौँ, ३१ साउन - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमान्दारिताका
काठमाडौं । वरिष्ठ साहित्‍यकार मदनमणि दीक्षितको ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको कालिकास्थानस्थित आफ्नै घरमै निधन भएको हो । केहीदिन अघि निमोनियाका कारण सुमेरु अस्पतालमा भर्ना गरिएका दीक्षितलाई स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि घर ल्याइएको थियो । १९७९ साल फागुन ६ गते काठमाडौंको गैरीधारामा जन्मेका
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका १९ जना पक्राउ परेका छन्। आरक्षण बचाउन माग गर्दै सिंहदरबार घेर्न जाने क्रममा उनीहरूलाई भद्रकालीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रदर्शन भद्रकालीबाट सिंहदरबार पुगेर धर्नामा परिणत हुने कार्यक्रम
२ करोड माग्दै धम्क्याउने युवकलाई गोली हानी पक्राउ
काठमाडौं । गाँउपालिकका अध्यक्षलाई धम्क्याएर रकम असुल्न खोज्ने एक युवकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गोली हानेको छ । काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित बिजेश्वरी हाउजिङमा बस्दै आएका रामेछाप मन्थली नगरपालिकाका लोप्सन भनिने मिलन तामाङलाई गोली हानेर नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ । उनलाई दुई
बाढीले बाँध बगाएपछि ५ दिनदेखि गाउँ अन्धकार
बाग्लुङ । बाढीले विद्युत आयोजनाको बाँध निसीखोला गाउँपालिकामा १० गाउँ ५ दिनदेखि अन्धकार छ। निसीखोला गाउँपालिका–४ जैथुम्कामा रहेको १२० किलोवाट क्षमताको निसीखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँध बाढीले बगाएपछि पाँच दिनदेखि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको हो । आयोजनाको उत्पादन बन्द भएसँगै निसीखोलाका बोहोरागाउँ,
ग्यासको मूल्य घट्यो,पेट्रोल,डिजेल र मट्टीतेलको बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समयोजन गरेको छ । मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि निगमले गरेको मूल्य समायोजनमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य २५ रुपयाँ घटेको छ । पेट्रोलमा एक रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टीतेलको मूल्य भने लिटरमा एक रुपैयाँ
सुर्खेत, साउन २० गते । कर्णाली प्रदेश सरकार विकासको तिर्खाले ब्याकुल छ । आर्थिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको अपर्याप्तताभित्र पनि प्रदेश सरकारले गरेको विकासबाट सङ्घीय सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्तो लोकप्रिय नाराको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विकासको प्यास मेटाउने सोचलाई सार्थक विन्दुमा
काठमाडौँ – भनिन्छ, ‘सफल हुनका लागि नयाँ काम गर्नु पर्दैन, अरूले गरेका काम अलि फरक तरिकाले गर्ने हो भने त्यही कामबाट व्यक्ति सफल हुन धेरै समय लाग्दैन। अनि, कुनै पनि काम ठूलो र सानो, राम्रो र नराम्रो पनि हुँदैन।’ यो भनाइलाई पहिलेदेखि नै आत्मसात् गर्दै आएका वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. सूर्यप्रसाद पाण्डेले
काठमाडौँ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका विभिन्न भागमा आगामी तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार, मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू–भागबाट नेपाल भित्रने क्रममा देखिएकाले वर्षाको सम्भावना छ । मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार, शनिबार तराईको सिराहा, सप्तरी जनकपुर
पहिरोले घर बगाउदा बाजुरमा आमा–छोरीको मृत्यु
बाजुरा । बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–६ शान्ति टोलमा गएराति १२ः३० बजे गएको पहिरोले घर बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । घर बगाउँदा ३० वर्षीया निरुता चदारा र उनकी छ वर्षीया छोरी निस्मिता चदाराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक उद्धवसिंह
जनकपुरमा दुई टाउका भएको शिशुको जन्म
जनकपुर । जनकपुरमा एक महिलाले २ ओटा टाउको भएको अचम्मको बालक जन्म दिएकी छिन् । जनकपुरधामको मिहिलाल अस्पतालमा सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका बल्टिया बस्ने २५ वर्षिय सविता वैद्यले २ टाउको भएको बच्चा जन्माएकी हुन् । अस्पतालका अनुसार बिहीवार बेलुका साढे ५ बजे बच्चा जन्मिएको थियो । ६ महिनाको गर्वभती सवितालाइ
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट लागुऔषधसहित एकलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाको प्रहरी टोलीले बाराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना५ख ४१९१ नंको बस जाँचका क्रममा लागुऔषधसहित बारा कलैयाका १६ वर्षीय राजु चौधरीलाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो । प्रभागका प्रमुख,
काठमाडौं, १० साउन । स्वतन्त्र नागरिक समाजले मंसिरसम्ममा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थालाई भूमिका नदिए ७२ घण्टे सत्याग्रहको थाल्ने चेतावनी दिएको छ । समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालले लामो समयदेखि आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विभिन्न खबरदारी सभा गर्दै आएपनि सरकारले सुनवाइ नगरेको प्रति आक्रोश पोखे ।
काठमाडौँ, १० साउन - मनसुनपछिको विपद्का कारण मुलुकभर १११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विपद्मा परेर ४० जना बेपत्ता भएका छन् भने ६७ घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी गुल्मीमा १३ जना रहेका
भारी वर्षाको सम्भावना, सचेत रहौं
काठमाडौं । केही दिनदेखि कमजोर रहेको मनसुन पुनः सक्रिय भएकाले देशभर मुसलधारे वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । न्यूनचापीय रेखा नेपाल प्रवेश गरेको र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय हावाको प्रभावले बुधबार देशको धेरैजसो स्थानमा मध्यम तथा मुसलधारे वर्षाको
गुल्मीमा पहिरो : ६ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ता
बुटवल । सोमबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाले पहिरो जाँदा गुल्मीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सत्यवती गाउँपालिका ३ र ४ मा पहिरोले घर बगाउँदा ६ जनाको मृत्यु भएको हो भने ५ जना बेपत्ता भएका छन्। सत्यवती ४ लिम्घाका स्थानीय छविकला विक, धन बहादुर विक र पम्फा विकको घर पहिरोले पुरेको हो । स्थानीयवासीका अनुसार ९ जना
काठमाडौं । मनसुनी वर्षाले फेरि सक्रिय हुने लक्षण देखिएकाले देशका पूर्वी तथा मध्य भागमा भारी वर्षा हुने मौसमविद्हरूले पूर्वानुमान गरेका छन् । असार २६, २७ र २८ गते अविरल परेको वर्षाका कारण मध्य र पूर्वका नदीमा बाढी आउँदा तराई क्षेत्र डुबानमा परेको थियो । त्यसपछि मत्थर हुँदै गएको वर्षा शनिबारदेखि फेरि सक्रिय
गत वर्ष माघ महिनामा नक्सालस्थित बालमन्दिरमा उद्धार गरी ल्याइएका एक नवजात शिशुलाई जोगाउन "कुनै आमाको स्तनपान नै गराउनुपर्ने" सुझाव चिकित्सकले दिए। ललितपुर इमाडोलको एउटा उजाड ठाउँमा फालिएको अवस्थामा ती बालकलाई एक स्थानीय महिलाले भेटेकी थिइन्। निकै कम तौल भएका र कुपोषित ती शिशुलाई नाइटो सुन्निने
काठमाडौं । साउनमा पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई सहज र व्यवस्थित ढंगले पूजाअर्चना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ । साउन महिना शुरुभएसँगै पशुपतिनाथमा भक्तजनको भीड बढ्न थालेपछि लाम व्यवस्थापन, सुरक्षा, जुत्ता तथा चप्पल कक्ष थप गर्नेलगायत तयारी शुरु गरिएको कोषका उपनिर्देशक